Nouvelle Zélande: Fotoana Ho An’ny Fiovàna Koa? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 14:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, বাংলা, Español, English
Nitana fifidianana solombavambahoaka ilay firenena an-dranomasina, i Nouvelle Zélande, tamin'ny 8 Novambra 2008. Araka ny vokatra vonjimaika, mahazo 45.5% amin'ny vato ny antoko mpanohitra ary 65 amin'ireo seza 112 ao amin'ny Parlemanta, izay midika fa ho lasa Praiminisitra i John Key avy ao amin'ny Antoko Nasionaly mpifikitra amin'ny nentindrazana. Etsy an-daniny, very seza 7 amin'ny 43 kosa ny Antokon'ny Mpiasa eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Nanaiky ny fahareseny ary niala tamin'ny toerana naha-mpitarika ny Antokon'ny Mpiasa azy ny Praiminisitra Helen Clark, nitondra nanomboka tamin'ny 1999.
Manome vaovao sy fandalinana lalina mikasika ny rafi-pifidianan'i Nouvelle Zélande sy ny vokatra tamin'ity taona ity i Jim Belshaw avy ao amin'ny Personal Reflections. Aminy:
Satria manome ny ampahany lehibe amin'ny mponina ao Nouvelle Zélande ny mpifindramonina, manana kandidà avy amin'ny firazanana maro samihafa ny antoko maro. Mba hankaherezana ny vitsy an'isa hifidy, raisina ny fepetra ahitan'ny mpifindramonina soa, toy ny soratan‘i sarahliu88 [zh]:
sary vote '08 avy amin'i Jake Faulkner